सुनिल उलक ✍
राणाकालमा अंग्रेज सरकारसंगको सबैभन्दा सफल कूटनीति नै शिकार कूटनीति थियो । अंग्रेज सरकारसंग केही कुरा पुरा गर्नु थियो वा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नुछ भने राणा श्री ३ हरु अंग्रेज सरकारका उच्च पदस्थ वा राजा युवराजहरुलाई नेपालको जंगलहरुमा शिकार खेल्न निम्तो पठाउँथे । यसरी विशेष निम्तो पाए पछि अंग्रेज शासकहरु असंख्य जंगली जनावरहरुको शिकार गर्दथे । खासै भनौ भने यो कुनै शिकार जस्तो हुदैनथ्यो । चारैतिरबाट घेरिएर भाग्न असफल बाघ, भालु, गैडा तथा अन्य जनावरहरुको सहज र सुरक्षित शिकार गर्दथे । ति विशिष्ट पाहुनाहरुले हानेको गोलीबाट नै जनावर मर्दथे वा नजिकै रहेका नामुद शिकारीको गोलीले मारिएका हुन् भन्ने कसैले पनि थाहा नै पाउँदैनथे । हप्तौको शिकार पछि मारिएका जनावरहरुका छाला टाँसेर सुकाइन्थे र सजावटको लागि दरबार लगिन्थे । मासु भने हजारौ सहयोगी मजदुर तथा विशिष्टहरुको आहार हुने गर्दथ्यो । मारिएका जनावरहरुको संख्या ठूला अक्षरले इतिहास बन्दथे । तर शिकारको क्रममा जंगली जनावरको आक्रमण तथा बिरामी भएर मरेका मजदुरहरुको कुनै आंकडा कतै उल्लेख नै हुँदैनथ्यो । तिनका लाशहरु अन्जान जंगलमा गाडिन्थे वा जंगली जनावरहरुको आहारको लागि जंगल मै फ्यालिन्थे । शिकारको समाप्ति पछि स्वदेश फर्केका अंग्रेज शासक राणा महाराजाको लागि कुनै तक्मा घोषणा गर्दथे । तर ति मजदुरहरुको नाम कतै उल्लेखसम्म हुँदैनथ्यो ।
सबैभन्दा बढी जनावर जुद्धशम्शेरको शिकार तथा उनको समय आएका पाहुनाहरुको गोलीको कारण मारिए । जुद्धशम्शेरको शासनकालमा ४३३ बाघ, ५३ गैडा, ९३ चितुवा तथा २२ जंगली भालु मारिएका थिए । जंगबहादुरको शासनकालमा जम्माजम्मी २६ बाघ मारिएका थिए।
शिकार कूटनीति कति असहज लाग्दछ नाम सुन्दा पनि । कसैको मृत्युले राणाहरुको प्रशस्ती गायन हुने एउटा इतिहासका कथाहरु । शिकार कूटनीतिको शुरुवात जंगबहादुरको पालामा भएको थियो । वि.सं. १९३२ को माघमा पश्चिम बनवासामा बेलायती युवराज अल्बर्ट एडवर्ड (पछि राजा एडवार्ड सातौँ) शिकार खेल्न आएका थिए । वि.सं. १९०६ को माघमा बेलायत पुगेका जंगबहादुर बेलायती शासकहरुको प्रिय भइसकेका थिए । त्यसपछि लखनउका सुल्तानको विरुद्ध लड्न गोर्खाली सैनिकहरुको साथ जंगबहादुर स्वयं पुग्दा अझ बढि प्रभावित भए । वि.सं. १९१४ असार २० मा ६ वटा गोर्खा रेजिमेन्टको नेतृत्व गर्दै जंगबहादुर लखनउका लागि काठमाडौबाट हिँडेका थिए । यसरी बेलायतलाई हरतरहले खुशी बनाउन सफल जंगबहादुरले रानी भिक्टोरियालाई युवराज अल्बर्ट एडवर्डको नेपालमा शिकार यात्राको अनुमति दिलाएका थिए । अहिलेको शुक्लाफाँटा आरक्षण रहेको भू-भागमा शिकारको आयोजना गरिएको थियो । दुई हप्ताको शिकारमा २३ बाघ मारिएका थिए । यसको तीन वर्ष पछि अंग्रेजले नेपाललाई नयाँ मुलुकको रुपमा रहेको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरको करिव ९२०० वर्ग कि.मी क्षेत्र नेपालले फिर्ता पाएको थियो ।
वि.सं. १९३२ को माघमा पश्चिम बनवासामा बेलायती युवराज अल्बर्ट एडवर्ड (पछि राजा एडवार्ड सातौँ) शिकार खेल्न आएका थिए ।
जंगबहादुरको यो कूटनीतिक प्रयासको रुपमा युवराज एडवर्गको नेपालमा शिकारको लागि आगमनको ८ वर्ष पछि वि.सं. १९४१ को साउनमा रणोद्वीपको शासनकालमा ड्यूक अफ पोर्टल्याण्ड (छैठौ) विलियम क्याभेन्डिस नेपालमा शिकारको लागि आएका थिए । उनको साथमा त्यस बेलाका प्रख्यात शिकारी लर्ड दि ग्रे पनि आएका थिए । लर्ड दि ग्रे पछि लर्ड रिपनको नामले भारतमा केही समयको लागि भाइसराय पनि बने । महान शिकारी लर्ड दि ग्रे ले एकै गोलीबाट ६ वटा तित्राको शिकार गरेको कीर्तिमान राखेका थिए । उनले आफ्नो शिकार जीवनमा करिव ५ लाख ५० हजार चरा तथा खरायोहरु मारेका थिए । साथै नेपालमा शिकारमा आउँदा ९७ बँदेल, १२ जंगली अर्ना, ११ बाघ तथा २ गैडा मारेका थिए ।
वि.सं. १९४१ को साउनमा रणोद्वीपको शासनकालमा ड्यूक अफ पोर्टल्याण्ड (छैठौँ) विलियम क्याभेन्डिस नेपालमा शिकारको लागि आएका थिए ।
त्यसैगरि काका रणोद्वीपको हत्या गरि श्री ३ बनेका वीर शम्शेरको सत्तालाई अंग्रेजहरुले स्वीकार गरेनन् । वीरशम्शेर कूटनैतिक चालले अंग्रेज सरकारलाई आफ्नो सरकारको मान्यता दिलाउन भरमग्दुर प्रयास गरिरहे । अंग्रेजले पनि चाल चलिरहे । आफ्नो मनसाय पुरा भएमा वीरशम्शेरको प्रधानमन्त्रीत्व स्वीकार गर्न अंग्रेज तैयार थिए । यसैबेला शिकारको लागि जर्ज पाँचौका छोरा युवराज अल्वर्ट विक्टरलाई वीर शम्शेरले निम्तो पठाए । वि.सं. १९४६ को मंसिरमा नेपाल आइपुगेका उनको पनि विशेष आतिथ्यता वीर शम्शेरले जंगलमा शिकारबाट नै गराइएको थियो ।
वि.सं. १९४६ को मंसिरमा वीरशम्शेरको शासनकालमा जर्ज पाँचौका छोरा युवराज अल्बर्ट विक्टर शिकारको लागि नेपाल आइपुगेका थिए ।
वि.सं. १९४९ को फागुनमा भने गैर बेलायती शिकारीको आगमन नेपालमा भयो । अस्ट्रियाका युवराज आर्कड्युक फ्रान्ज फर्डिनान्ड वीर शम्शेरको निम्तोमा शिकारको लागि आएका गैर बेलायती हुन् । उनले नेपालको कैलाली र कञ्चनपुरमा १७ बाघ ६ गैडा तथा असंख्य अन्य जनावरको शिकार गरेका थिए । यस शिकार यात्रा कूटनीतिक रुपले महत्वपूर्ण नभए पनि अन्य कारणले निकै महत्वपूर्ण भने रह्यो । युवराज आर्कड्युक स्वयं महान शिकारी भए पनि साराएगोको यात्रामा रहँदा वि.सं.१९७१ असार १५ मा उनी स्वयं शिकार भए । उनको हत्या केबल एक व्यक्ति हत्याको रुपमा रहेन् । यहि हत्याको कारणले पहिलो विश्वयुद्ध शुरुवात भयो जसले गर्दा २ करोड भन्दा बढिको मृत्यु भयो तथा ४ करोड सर्वसाधारण तथा सैनिकहरु घाइते भए ।
वि.सं. १९४९ को फागुनमा भने गैर बेलायती अस्ट्रियाका युवराज आर्कड्युक फ्रान्ज फर्डिनान्ड वीरशम्शेरको निम्तोमा शिकारको लागि आएका थिए ।
वीरशम्शेरले भारतमा रहेका भाइसराय लर्ड कर्जनलाई पनि शिकारको निम्तो दिएका थिए । तर लर्ड कर्जनले स्वीकृति दिँदासम्म वीरशम्शेर विमार भए । उनले त्यतिबेला आफू शिकारमा जान नसक्ने जानकारी पठाए । यसै अवसरमा अंग्रेजले भारतीय सेनामा रहेको गोर्खालीको संख्या बढाउन अनुरोध गरे जसलाई वीरशम्शेरले सहजै स्वीकार गरे । जसले गर्दा अंग्रेज सरकारले मान्यता दिइहाले । पछि चन्द्रशम्शेरले नै लर्ड कर्जनलाई शिकारको लागि फेरी आमन्त्रण गरे ।
वि.सं. १९५७ को चैत्र १७ गते लर्ड कर्जन शिकार खेल्न नेपाल आइपुगेका थिए । कूटनीतिमा माहिर खेलाडी चन्द्रशम्शेरले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न लर्ड कर्जनलाई शिकारको लागि निम्तो पठाएका थिए । भाइसरायको भ्रमणले धीरशम्शेरको सन्तानमा रहेको श्री ३ मा अंग्रेजको पूर्ण समर्थन रह्यो । दाजु देवशम्शेरलाई सत्ताच्युत गरेको दाग पनि चन्द्रशम्शेरले अंग्रेज भाइसरायको आतिथ्यतासंगै मेटे । यसरी शिकार खेल्न आएका लर्ड कर्जन भारतबाट फर्केर बेलायतमा सेवानिवृत रुपमा रहँदा वि.सं. १९६४ असार १७ गते भारतीय स्वतन्त्रता सेनानी मदनलाल ढिंगराको गोलीको शिकार भए ।
वि.सं. १९५७ को चैत्र १७ गते लर्ड कर्जन शिकार खेल्न नेपाल आइपुगेका थिए ।
चन्द्रशम्शेरले पनि आफ्नो बेलायत यात्राबाट फर्केर आए पछि अंग्रेज राजा जर्ज पञ्चमलाई नेपालमा शिकार खेल्न आमन्त्रण गर्न सफल भए । राजा जर्ज पञ्चम राजा बनेको केही समय पछि नै लामो यात्राको क्रममा भारत तथा नेपाल पनि आएका थिए । चन्द्रशम्शेरको विशेष निमन्त्रणामा शिकारको लागि आइपुगेका राजा जर्ज पञ्चम वि.सं. १९६८ पुस ३ को बिहान १० बजे ठोरीको बाटो हुँदै नेपालको सिमा प्रवेश गरेका थिए । भर्खरै नेपालका राजा पृथ्वीवीर विक्रमको देहावसान भएको तेह्र दिन सकिएको थियो । तर पनि राजा जर्ज पञ्चमको भ्रमण तालिकामा कुनै फेरबदल गरिएन् । बेलायती राजाको स्वागत गर्न समकक्षी नेपाली राजा पुग्न पाएनन् । भर्खरै राजा भएका बालक त्रिभुवन सानै थिए । साथै श्री ३ चन्द्रशम्शेर पनि स्वागतको लागि पुगे । चन्द्रशम्शेरको साथ दुई छोरा मोहनशम्शेर र केशरशम्शेर तथा नेपालका लागि बेलायती रेसिडेन्ट ले.क. जोन मानर्स स्मिथ पनि पुगेका थिए । राजाको शिकारको सम्पूर्ण प्रबन्धको लागि अर्का छोरा बबरशम्शेर खटाइएका थिए । चितवनको कसरामा बेलायती साम्राज्यका सबैभन्दा उच्च व्यक्तित्वलाई नै नेपालमा शिकारको लागि चन्द्रशम्शेर सक्षम हुनु राणाहरुको लागि नै अहोभाग्य थियो । चन्द्रशम्शेरले जर्ज पञ्चमको आतिथ्यतामा केही कमि हुन दिएनन् । जर्ज पञ्चमको लागि कसरा तथा सुखिवारमा दुईवटा क्याम्प बनाइएको थियो । सम्पूर्ण सुख सुविधा सहितको सो क्याम्प कुनै दरबार भन्दा कम थिएन् । तातो तथा चिसो पानीको व्यवस्था तथा जेनेरेटरबाट बिजुली समेत बालिएको थियो । सन १९११ को क्रिसमस राजा जर्ज पञ्चमले नेपालमा नै मनाएका थिए । डिसेम्बर २८ अर्थात पुस १३ गते नेपालबाट बिदा लिएका थिए । चन्द्रशम्शेरले आफ्नो नेतृत्वमा १२००० सैनिक तथा कर्मचारीहरु नै खटाएका थिए । साथै ६०० हात्ती र २००० शिकारी, मजदुर तथा माउतेहरु पनि शिकारको लागि व्यवस्था गरिएको थियो । त्यतिबेला ३९ बाघ, ४ वटा भालु, १८ वटा गैडा तथा अन्य जंगली जनावरहरु पनि मारिएका थिए ।
राजालाई चन्द्रशम्शेरले उपहारको रुपमा विभिन्न जनावरहरु दिएका थिए । प्रख्यात हात्ती जङ्बहादुर तथा बंगाल टाइगरको साथै गैंडाको बच्चा तथा तिब्बती गधाको साथ ७० प्रकारको जनावरहरु उपहारमा दिएका थिए । साथै नेपालको प्रख्यात कलाकृतिहरु पनि उपहारमा दिएका थिए । राजा जर्ज पञ्चमले पनि श्री ३ चन्द्रशम्शेरलाई Knight Grand Commander of the Royal Victorian Order (GCVO) साथै दिल्ली दरबारबाट उच्च पदस्थ तथा राजा महाराजाहरुलाई वितरित शुभराज्याभिषेक गोल्डमेडल पनि दिइएको थियो ।
चन्द्रशम्शेरको विशेष निमन्त्रणामा शिकारको लागि राजा जर्ज पञ्चम वि.सं. १९६८ पुसमा आइपुगेका थिए ।
वि.सं. १९७८ को मंसिर २९ मा युवराज एडवर्ग पछि (राजा एडवर्ग आठौँ) नेपालमा शिकारको लागि ठोरी आइपुगेका थिए । राजा जर्ज पाँचौ झै ठोरी हुँदै कसरामा आएका थिए । उनको शिकारको प्रबन्ध चन्द्रशम्शेरले नै मिलाएका थिए । चन्द्रशम्शेरको विशेष आतिथ्यतामा रहेका उनले पनि चितवनको कसरामा १४ बाघ ७ गैडा २ चितुवा र २ भालुको शिकार गरेका थिए । युवराज एडवर्ग राजा भएको केही समय पछि नै विलिस सिम्पसनसंगको प्रेमसम्बन्धका कारण राजकाज त्यागेर अमेरिकी राज्य मियामी गएर बसेका थिए ।
वि.सं. १९७८ को मंसिर २९ मा युवराज एडवर्ग जो पछि राजा एडवर्ग आठौँ भए शिकारको लागि आइपुगेका थिए ।
वि.सं १९८९ को माघमा बेलायती मन्त्री अर्ल अफ एलेसफोर्ड, मेजर जनरल सर रिचार्ड हवार्ड तथा कर्नल स्टिभेन्सन चितवनमा शिकारको लागि आएका थिए । शिकारमा रहदै फिनल्याण्डका फिल्ड मार्सल कार्ल गुस्तफा एमिल मेनरहेम पनि भ्रमणमा आएको समय शिकारको लागि आमन्त्रण गरिएको थियो । कार्ल गुस्तफा मेनरहेम दोश्रो विश्व युद्धको समय फिनल्याण्डका राष्ट्रपति बन्न सफल भए । रसियन अक्टोवर क्रान्तीको समय रसियन सेनामा रहेका गुस्तफा फिनल्याण्ड फर्किएर फिनल्याण्डको सेनामा फिल्ड मार्सल सम्म बने साथै रसियाको विरुद्धमा खडा रहे । त्यतिबेला फिल्ड मार्सल मेनरहेमले शिकार गरेको बाघ निकै लामो थियो । करिब १० फिट ७ इन्च नापिएको बाघ त्यतिबेलाको चर्चित बाघ थियो । जुद्धशम्शेरले सोही शिकारको क्रममा मारेको १० फिट ९ इन्च लामो बाघ सबैभन्दा लामो बाघको रुपमा लिइएको थियो ।
वि.सं १९९१ माघ १२ मा दिल्ली पुगेका श्री ३ जुद्धले दिल्ली दरबारमा भव्य स्वागत पाए । भाइसराय लर्ड लिनलिथगोको स्वागतबाट प्रभावित भएका प्रधानमन्त्री जुद्धशम्शेरले पनि भाइसराय लर्ड लिनलिथगोलाई शिकारको निम्तो दिएर आए । वि.सं १९९५ को मंसिर १७ मा भाइसराय लिनलिथगो सपरिवार शिकारको लागि चितवन आइपुगेका थिए । उनको साथ श्रीमती तीन छोरीहरु तथा भाइसरायका कर्मचारीहरु पनि थिए । भाइसरायले जुद्धशम्शेरको साथ चितवनको जंगलमा आठ दिनको शिकारमा १४ बाघ र ३ गैँडाको शिकार गरेका थिए ।
१९९५ को मंसिर १७ मा भाइसराय लर्ड लिनलिथगो सपरिवार शिकारको लागि चितवन आइपुगेका थिए ।
जुद्धशम्शेरको शासनकाल (१९९०-९७) अवधिमा अवधिमा ४३३ बाघ, ३८ गैडा, ९३ चितुवा, २२ भालु, २ सिंह, २० गोहि, १ अर्ना तथा ७० हरिण शिकारमा मारिएका थिए । राणाकालमा हात्तीलाई गणेश भगवानको रुपमा लिने हुँदा हात्तीको शिकार कहिल्यै गर्दैनथे । तर हात्तीलाई भने समात्ने गर्दथे ।
वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले देशमा भर्खरै शुरु भएको प्रजातान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेको केही समयमा नै बेलायती महारानी एलिजावेथलाई स्वागत गरेको थियो । शायद देशले अन्तिम पटक शिकार कूटनीतिको प्रयोगको रुपमा एलिजावेथलाई पनि कसरामा शिकारको कार्यक्रम बनाइएको थियो । वि.सं. २०१७ सालको पुस १ गते राजा महेन्द्रले प्रजातान्त्रिक सरकारको अपदस्थ गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको शुभारम्भ गरेका थिए । यसको ढाइ महिनापछि फागुन १५ मा रानी एलिजाबेथको टोली काठमाडौ आइपुगेको थियो । यो कुनै संयोग होइन पूर्व तैयारी थियो । विश्वसामु पञ्चायती व्यवस्था देशको भूगोल र जनचाहना अनुरुप ल्याइएको थियो भन्ने देखाउन पाउने अवसर पनि थियो । रानीको लागि भोलिपल्ट नै कसरामा शिकारको व्यवस्था मिलाइएको थियो ।
राजा जर्ज पाँचौको स्वागत गरेको नेपालले फेरी उनको नातिनी रानी एलिजाबेथको पनि स्वागत गर्ने अवसर पाएको थियो । जंगल भित्र विशेष रुपले रानी एलिजाबेथ तथा राजा महेन्द्रको लागि बनाइएको बिशाल क्याम्पसम्म पुग्ने सडक बुल्डोजरले सम्याइएको थियो । जहाजको लागि झण्डै १ किमी लामो धावनमार्ग भएको विमानस्थल नै बनाइयो । क्याम्प रहेको अढाई वर्ग किमी क्षेत्रको जमिन खोतलेर मजदुरहरुलाई बिच्छी तथा अन्य किराफट्याङ्ग्रा टिप्न लगाइएको थियो । आकाशमा औषधी छरेर लामखुट्टे तथा झिंगाहरु मारिएको थियो । यसरी सम्याइएको तथा किराफट्याङ्ग्रा मुक्त जमिनमा तराइबाट ल्याइएको विशेष घाँस रोपिएको थियो । कैयौँ दिनसम्म काठमाडौका दमकलहरु ति घाँसहरुको लागि पानी छर्न प्रयोग गरिएको थियो । क्याम्पको बीचमा विश्वको उच्च हिमशिखर सगरमाथाको नमुना तैयार गरिएको थियो ।
२०१७ फागुन १६ मा रानी एलिजाबेथको टोली शिकारको लागि कसरा पुगेको थियो ।
क्याम्प भित्र बनाइएको सडक एकातर्फ बेलायती रानीको क्याम्प थियो भने अर्को तर्फ नेपालको राजाको क्याम्प बनाइएको थियो । रानीको क्याम्पसंगै सुरक्षा तथा सहयोगीको क्याम्प तथा प्रेस तथा मिडियाको लागि प्रबन्ध मिलाइएको थियो भने राजा तर्फ पनि सुरक्षा तथा सहयोगीहरुको क्याम्पहरु बनाइएको थियो । कुनै महल वा दरबार भन्दा कमका बनाइएका थिएनन् यि क्याम्पहरु । तीनवटा ठूला ठूला किचन, ठूलो बैठक कोठा, प्रिन्स फिलिप तथा रानीको लागि अलग अलग शयनकक्ष, दुई ड्रेसिङ रुम, दुई विशेष सजावट सहितको बाथरुम तथा दुई पाहुना कोठा पनि बनाइएको थियो । रानीको कोठा रानीको प्रिय रङ गुलावी रङका सामग्रीले सजिएको थियो भने फिलिपको कोठा निलो रङका सामग्रीले सजिएको थियो । यता राजा महेन्द्रको क्याम्पको सजावटमा पनि कुनै कमी गरिएको थिएन् ।
त्यतिबेला रानीको साथ यात्रा प्रबन्धका लागि आएका विदेश सचिव लर्ड डगलस होमपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री नै बने । रानीको नेपाल बसाइको लागि सम्पूर्ण भोज तथा खानाको प्रबन्ध त्यतिबेलाका चर्चित बोरिस लिसानेविचले गरेका थिए । बोरिस भारतका ओडिसामा जन्मेका युक्रेनियन नागरिक थिए । उनले नेपालकै पहिलो होटल रोयल चलाएका थिए भने हाल रहेको याक एण्ड यतिका कल्पनाकार तथा शुरुका मालिक थिए । उनले रानीको अधिकांश भोज तथा खानाको लागि विशेष रुपले हङकङबाट सामग्री खरिद गरिएको थियो । पाहुनाहरुको लागि ल्याइएको खाद्य सामग्री बोकेर पानीजहाज कलकत्तामा तथा त्यहाबाट सडकमार्गमा काठमाडौं तथा सौराहा लगिएको थियो ।
रानीको लागि नेपालको सम्पूर्ण जंगलबाट ल्याइएका ३७६ हात्तीको लहरले स्वागत गरिएको थियो । हात्तीको लस्कर करिब ३ कि.मी. लामो थियो । सौराहाको जंगलमा बोरिसले याक एण्ड यति रेष्टुरेन्टको सानो स्वरुप नै तैयार गरेका थिए । विदेशबाट ल्याइएका बारगर्लहरुले पाहुनाहरुलाई सत्कार गरेका थिए । जंगलमा गरिएको पहिलो शिकार बाघ भने लर्ड होमको लागि डरलाग्दो शिक्षा नै भयो । उनको नजिकै रहेको बाघलाई उनले हानेको तीन गोली नै खेर गएको थियो । पछि एडमिरल कार्टर तथा सर माइकल एडेनले गोली हानेर मारे । पछि पत्रकार सम्मेलनमा लर्ड होमले लाचारीपूर्वक स्वीकारे, कहिल्यै हात्ती माथि नचढेको तथा बाघलाई चिडियाखाना भन्दा बाहिर नदेखेको । यसरी नेपालमा बेलायती राजपरिवारको अन्तिम शिकार समाप्त भयो । यसपछि नेपालमा पनि बिस्तारै शिकारमा नै प्रतिबन्ध लाग्यो । तर पनि नेपालको राजपरिवारको अन्तिम शिकार यात्रा भने राजा महेन्द्र तथा रानी रत्नको पश्चिम नेपालको शुक्लाफाँटाको शिकार यात्रा थियो ।
वि.सं. २०२७ सालको माघमा राजा महेन्द्र रानी रत्नको साथ शुक्लाफाँटाको जंगलमा शिकारको लागि पुगेका थिए । तर अफसोस माघ १७ मा शिकारको क्रममा हरिणलाई हानेको गोली ढुङ्गामा ठोक्किएर उछिट्टिदा रानी रत्नको कोखा तथा हातमा लाग्न पुग्यो । सेनाको हेलिकोप्टरले तुरन्तै काठमाडौ ल्याएर भोलिपल्ट नै अप्रेशन गरेर गोलीका छर्राहरु निकालियो । सो समय सेना तथा डाक्टरले लखनउ नजिकै भएको हुँदा लखनउ लग्ने सल्लाह दिइए पनि राजा महेन्द्रले काठमाडौ नै लैजान लगाएका थिए । कहिल्यै रातमा हेलिकोप्टर नउड्ने त्यो समय रातको रहस्यमय हेलिकोप्टरको आवाजले धेरै नै सशंकित भएका थिए । राजा माथि नै कुनै भवितव्य भएको अड्कल धेरैले काटेका थिए । यस घटनाको अर्को वर्षदेखि नेपालमा शिकारमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो ।
वि.सं. २०२७ माघ १७ गते शिकारको क्रममा राजा महेन्द्रले चलाएको बन्दुकबाट रानी रत्नको कोखा तथा हातमा गोली लागेको थियो ।
यस बाहेक पनि अनगिन्ति शिकारका कथाहरु राणाकालमा लेखिएका छन् । भारतीय राज्यका राजाहरु पनि शिकारका लागि आएको देखिन्छ । बिकानेरका राजा पर्यटकको रुपमा ब्रिटिस रेसिडेन्सीको निम्तोमा वि.सं १९९३ को फागुनमा पहिलो फिनल्याण्ड पर्यटक मार्शल मानर्हम आएका थिए ।
यसरी व्यक्तिगत तथा राज्यको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष स्वार्थको लागि हजारौँ जनावरहरु मारिए । राणाकालमा सबैभन्दा बढी जनावर जुद्धशम्शेरको शिकार तथा उनको समय आएका पाहुनाहरुको गोलीको कारण मारिए । जुद्धशम्शेरको शासनकालमा ४३३ बाघ, ५३ गैडा, ९३ चितुवा तथा २२ जंगली भालु मारिएका थिए । जंगबहादुरको शासनकालमा केबल २६ बाघ मारिएको थियो ।
देशले अचेल भने शिकार कूटनीतिलाई केही फरक बनाएको छ । जंगली जनावरको शिकारलाई परिमार्जन गरेर शिकार होइन उपहार बनाएको छ । जसलाई Rhino Diplomacy भन्ने गरिन्छ । कूटनीतिक स्वार्थको लागि गैंडा उपहारमा दिने गरिन्छ ।
The Historical Record Of The Imperial Visit To India - 1911
Journal Natural History Society
Tiger for Breakfast and others